MogokAds - Online Advertising Network in Myanmar: Pay-per-click advertising explained
by Bot 02:18 8 comments
About author: Team myOpenAds
သုဒဿန 22 July 2014 at 10:27
Pay per clip ကြော်ညာတွေကို online မှာတစ်ခါနှိပ်လျင်တစ်ပြားနှုန်းဖြင့် အမှန်တစ်ကယ် စိတ်မဝင်စားပဲ ပိုက်ဆံရရှိရေးအတွက် လုပ်ကိုင်နေသော ကြော်ညာကုမ္ပဏီများ online money ရှာဖွေသူများရှိနေသည့်အတွက် မိုကုတ်အက်စ် အနေနဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေကို ကြော်ညာခများ အလဟသ မဖြစ်ရအောင်ဘယ်လို ကာကွယ်မှုပေးထားလဲဆိုတာသိချင်ပါတယ်။
Bot 23 July 2014 at 06:51
ဟုတ်ကဲ့ပါ ခင်ဗျာ့ http://support.mogokads.com/support/tickets/new တွင် မေးခြင်းဖြင့် ကျွန်တော်တို့ ဆီက တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်က ဖြေကြားပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒါမှမဟုတ် အခြားသူများ မေးထားပြီးသည့် မေးခွန်းနှင့် အဖြေများကိုလည်း ပြန်လည်ကြည့်ရှု့နိုင်မယ့် နေရာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်
မင်းသော်တာ 26 November 2014 at 09:37
www.minntharlayit.blogspot.com အတွက် အကောင့်လျှောက်ထားတာ မရသေးလို့
Nyein Zaw 29 June 2016 at 01:06
menu bar က အလုပ်မလုပ်ဘူး
U Pyae Aung 19 July 2016 at 16:28
အနိမ့်ဆုံး Page View အရေအတွက် ဘယ်လောက်ရှိမှ MogokAds က ပူးပေါင်းပေးနိုင်မလဲသိချင်ပါတယ်
Unknown 13 September 2017 at 07:01
Nice blog here! Also your site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol paypal login
Unknown 24 October 2018 at 17:14
i want to use this network for my Telco VAS products pls inbox me details & contact info
Mingalarpar 10 September 2019 at 03:16